कथा-संस्मरण | सिमान्तMarginal कथा-संस्मरण – सिमान्तMarginal
''साहित्य शब्दहरू सम्मिलित ललित कला हो'' - जगदीश वाग्ले
”मेरो प्रश्न थियो कि -म यौटा पुरुष साथिसँग घण्टौं सगै बसें भने कुनै कुराको महशुस हुन्न तर यौटी केटी साथीसँग एक्लै हुंदैछु भने शरिरमा एक प्रकारको डर, कम्पन र तरलताको प्रवाह हुन थाल्छ । यस्तो किन हुन्छ ?’’ पुरा कथा
”म यसलाई प्राधिक सभ्यता भन्न रुचाउँछु। प्राधिविक सभ्यता यस मानेमा कि एक घण्टा मात्रै बिजुली र इण्टरनेट उपल्ब्ध नहुने हो भने जीवन अस्त ब्यस्त हुन्छ। वर्तमान समाजले मानविय कल्याणको वरिपरी रहेर बिकास गर्न सकिने सभ्यताका बारेमा त्यती सोचेको छैन। मलाई लाग्छ; जुन संभव थियो र रहिरहनेछ।” पुरा संस्मरण
”धरतीमा मैले गरेका कूकर्मको लागि दश वर्ष नर्कमा बिताउनु पर्दोरहेछ। त्यसपछि स्वर्ग छिर्ने मेरो बाटो क्लियर हुनेछ। त्यस पछिको पाँच वर्ष मैले स्वर्गमा परीक्षण भीसामा रहनु पर्छ। अनि बल्ल, मलाई स्वर्गको ग्रीन कार्ड प्राप्त हुने छ।” पुरा कथा
”अब प्रस्तवित बुहारीको नाउँमा अंश छ कि छैन भनेर सोध्न छोरा र तिनका बाबुहरु मालपोत कार्यालयको खरिदारको घरमा रु पाँच सयको भेटी लिएर पुग्ने भए । अंश पाउन असमर्थ चेलीहरुको विवाह हुन नसक्ने दिन आउने भयो अर्थात् जन्मँदै विधवा ।” पुरा कथा
‘मलाई राम्ररी थाहा छ कि यो मुलुक असल नेतृत्वको खोजीमा छ र राज्यले खोजिरहेको असल नेतृत्व म जस्ता विधवाको गर्भमा थिचिएको छ। सायद समाजका नाइकेहरु असल नेतृत्वको जन्ममा आफ्नो अस्तित्व नासिने डरले त्यसरी सृष्टि थिच्न मन पराउँदा हुन्।” पुरा कथा
आदरणीय बाबा, आमा !तपाईँहरुबाट म हराएको भोलि पैंतालिसौं दिन हुँदैछ । मलाई थाहा छ तपाईंहरु पुत्रको वियोगमा प्रत्येक निमेष छट्पटाइरहनु भएको छ । तपाईहरुलाई मैले दुःखमाथि दुःख थप्ने क्रम कमसे कम अब सकियो भनी ठानी दिनुहोला । र मेरो काजक्रिया गरेर संस्कारको बन्धनबाट छुटकारा पनि लिनुहोला । भाइ, म र तपाईंहरु सपरिवार जिन्दगी बनाउने ठूलो…
Read more छोराको सन्देश (कथा)
विधवा-क्रान्ति सुनसान सडक । एकाध माइक्रो बस, सरकारी सवारी साधन अनि नम्बर प्लेट छोपिएका अलि बाक्लै मोटर साइकलहरु । सेना र उसका ट्याङकरसशस्त्र र जनपथ प्रहरी चोक चौकामा छ्यापछ्याप्ति । मानव अधिकार र प्रेसका ब्यानर सहितका गाडीहरु र साइरन बजाउँदै गुडेका एम्बुलेन्स । लम्की-लम्की हिँडिरहेका यात्रुहरु । सेता माइक्रोबसमा रत्नपार्कतिर पुग्न हतारिएकी छु म पनि…
Read more विधवा-क्रान्ति (कथा)
(संस्मरण) त्यो रात सपनामा आफ्नै परिवारको एकजना सदस्यलाई समुन्द्रको छालले ढाकेको देखेको थिएं । स्कट्ल्यान्ड जाने पटक्कै मन भएन । सबै तयारी भईसकेको थियो । लण्डनको विक्टोरियाबाट रातिको नेसनल एक्स्प्रेस कोचमा १० घण्टा लगाएर एबर्डीन र त्यसपछी २ घण्टामा बान्फ पुगें । क्षितिजहिन एटलान्टिक समुन्द्रको किनार देख्नेबित्तिकै खुम्चिएको यो मन तेतिबेला सितांगै भयो जती बेला…
Read more घर नम्बर १३ देख्ने बित्तिकै सितांगै भएँ
(संस्मरण) वि सं २०५७ साल तिरको कुरा हो हामीहरुलाई लाइन्स क्लबको मीटिङमा सिक्किम जाने अवसर मिल्यो । त्याहाँका मुख्य मन्त्री सुबाश घिसिङलाई प्रमुख अतिथिको लागि अनुरोध गरियो तर उनले इन्कार गरे । स्थानिय नेपालीको मन जितेर पद पाएका घिसिङ्ले गोर्खा ल्याण्डको आन्दोलनसँग त्यो कार्यक्रमको कतै साईनो पर्छ कि भनेर डराएको देख्दा अचम्म पनि लाग्यो ।…
Read more मुख्यमन्त्री सुबाश घिसिङले इन्कार गरे
”ल यार यो तिमीलाइ”, रामले रेवन सनग्लास मलाई दियो र झोला खोल्दै स्विजरल्याण्डको आप्पेन्जेलरसान्ती ह्वीस्की निकाल्यो । भरेको नशा छोटै परिचयमा बाबेताले दिएकी सेतो टीशर्टमा प्रीण्ट गरेको सुन्दर मोन्तेरोजा हिमाल पनि देखाउन भ्यायो र, भन्यो – ‘‘कंचन हिमालकी परी त्यो बाबेताले मेरो मननै हल्लाउनेगरी मोहनी लगाइदिई । कति राम्रो मोरीको हाँसो पनि, टम्म मिलेका सेता…
Read more सेरिनाको प्रयोगशाला (कथा)
कथा – जीवन यात्रा के भयो! अभय तिमीलाई, आज निन्द्रा परेन? करिव आधा रात पार गरिसकेर ब्युँझेको प्रमोदले अभयको छटपटीलाई लक्ष्य गर्दै प्रश्न गर्छ । ठूलो श्वाससंगै शब्दोच्चारणमा अभय जवाफ दिन्छ -” खै के भो कुन्नि प्रमोद मलाई पटक्कै निन्द्रा परेन ।” अभय र प्रमोद एउटै सिक्काका दुइ पाटाहरू थिए, अर्थात ऊनीहरूको दुइटा स्वरुप मित्रताको एउटा…
Read more जीवन यात्रा (कथा)
(संस्मरण) मनभरि जन्मभूमिको उर्लिदो माया बोकेर कर्म भुमिमा बस्नुको पिडा असैह्य हुँदोरहेछ। सन्चार, भाषा र ग्लोबलाइजेशनले विश्वलाई एउटै गाँउमा परिणत गराएको भए पनि स्वदेशमा लागेको छाप नमेटिने रहेछ । प्रयाजसो कोहि न कोहिसङ् दिनहुु सम्पर्क नहुने होइन, तर दुख सुखमा सँगै हुनुको भावना नै आर्को । मर्दा-पर्दा र चाडपर्वका ती कार्यक्रममा परिवारको जमघट जहिले पनि अभाव रहिरहने रहेछ । यहि भएर…
Read more भुकम्पले हल्लाएको परदेशि मन (संस्मरण)
प्राधिक सभ्यताको चरम सुविधाबाट लाभान्वित यो जमात समयलाई जित्न भने सेकेण्ड-सेकेण्ड संघर्ष गरिरहेछन । क्याफिनको साहराले शिथिल इन्द्रियहरुलाई झकझक्याई रहेका, ट्रेन समात्न ट्रेन स्टेशन भित्र दौडिरहेका मनिशरुको हालत हेर्दा यस्तै लाग्छ । म यसलाई प्राधिक सभ्यता भन्न रुचाउँछु । किनभने वर्तमान समाजले मानविय कल्याणको वरिपरी रहेर बिकास गर्न सकिने सभ्यताका बारेमा त्यती सोचेको छैन । मलाई लाग्छ; जुन संभव थियो र रहिरहनेछ ।
Read more वेलायती जीवनको एक क्षण(संस्मरण)
(संस्मरण) कालो ओभर कोट, न्याभी कट्टराइको फ्ल्याट क्याप, कालो ट्राउजर (वेलायतमा पाइण्टलाई ट्राउजर भनिन्छ) र कालै जुत्ता लगाएर प्ल्याट फर्म नम्बर तिनमा ट्रेन कुरेर उभीइरहेको थिएं । मन पर्ने कोष्टाको नभए पनि लोकल शप पम्किनको कडा कफी हातमा थियो- क्याफे अमेरिकानो ! ट्रेन स्टेसन हो; आँखाहरु डुलिरहेका थिए । यतिकैमा आकर्शक जाइण्ट शरीर भएकी गोरी…
Read more गोजी भित्र मोजा र मोजा भित्र सिक्का
केही दिन अघि हफिङ्टन पोष्टमा एकजना नागरिक पत्रकार जेरेमी निक्सको पोस्ट पढने मौका मिल्यो । ”मेरा मित्रहरु जसले डोनाल्ड ट्रम्पलाई समर्थन गर्छन, तिनैलाई एउटा खुला पत्र” शिर्षकमा पोखिएका निक्सका बिचारहरु अमेरिकि राष्ट्रपतिहरुले लिँदै आएका बिचारभन्दा साँचै नै उच्च लाग्थ्यो । पत्रको रुपमा लेखिएको यो लेखमा प्रत्येक अमेरिकिहरुका लागि एउटा सन्देश छ । मनै छुने यो…
Read more अमेरिकी मतदाताहरुलाई खुला पत्र !